गंगास्नानको समान पुण्य प्राप्त हुने डडेल्धुराको ‘परशुराम धाम’ - सुदूरखबर डटकम
गंगास्नानको समान पुण्य प्राप्त हुने डडेल्धुराको ‘परशुराम धाम’
label सुदूर खबर संवाददाता query_builder January, 06 2019
डडेल्धुरा, पुस २२ । सुदूरपश्चिमकै पवित्र तीर्थस्थल परशुराम धाम डडेल्धुराको परशुराम नगरपालिका–५ परिगाउँमा अवस्थित छ। श्यामा (महाकाली) र एला (रंगुन) नदीको संगममा रहेको यस तीर्थमा भृगुवंशी महर्षी जगदग्नि र रेण्ुका पुत्र परशुरामले तपस्या गरेको विभिन्न पुराणहरुमा वर्णन गरिएको छ।
एला र श्यामाको संगममा जगदग्नि पुत्र परशुरामको आश्रय रहेको स्कन्दपुराणमा उल्लेख गरिएको छ। हैयेय वंशी क्षत्रिहरुले पिता जगदग्निको हत्या गरि कामधेनु गार्य अपहरण गरेको र आततायी क्षतियहरुको अतयाचार कम गर्न क्षत्रिय विनास गरेको एक्काइस पटक पृथ्वीलाई क्षत्रि विहीन गरेपछि सरयूश्यामा नदीमा स्नान गरेको पुराणमा उल्लेख छ।
महाकालको जटावाट निस्केको मन्दाकिनी गङ्गा महाकाली नदीमा स्नान गर्नाले गङ्गास्नान को वरावर पुण्य प्राप्त हुन्छ, त्यस्तै गङ्गाको तटमा अवस्थित परशुराम तीर्थमा स्नान, तर्पण, गर्नाले पितृ उद्धार तथा देव लोक प्रप्त हुने पवित्र तीर्थ भनेर वर्णन गरिएको परशुराम तीर्थ महाकली नदीको दक्षिणतर्फ अवस्थित छ।
परशुराम तीथीमा स्नानको निकै ठूलो महत्व रहेको छ। गंगास्नानको समान पुण्य प्राप्त हुने पौराणिक मान्यता छ। त्यसमा पनि मकर स्नान अर्थात माघ स्नानको निकै ठूलो महत्व रहेको छ। स्नानसंगै पितृ कार्य, देव पूजन, यज्ञयागादी विधीपूर्वक गने गरिन्छ।
यज्ञयागादीसंगै विवाह, व्रतबन्धआदी सस्कार र अनुष्ठान गर्ने गरिन्छ। रथ पुजनको विषेश महत्व रहेको छ, विष्णु कुण्डमा बिष्णु, बामदेव, कुण्डमा शीव,परशुराम कुण्डमा परशुराम भगवानको पूजा र नदीतटमा रहेको शिवालिङ्गमा शिवपुजनको विशेष महत्व रहेको छ। अति पपित्र वामघाटमा अन्तेष्टि संस्कारको निकै महत्व रहेको छ।
यी हुन प्रमुख स्थलहरु
मानसखण्डसहितमा श्यामा र एलाको सङ्गम अति नै पवित्रको सङ्गम मानिएको छ। महाकाली नदीलाई श्यामा, सरयु, सुरभागा, मन्दाकिनी, वैयासिकी, कालिन्दी, काली भनिन्छ भने रंगुन नदीलाई एला, रेणुका भनि पुराणमा वर्णन गरिएको छ। एलायाः सङ्गमं पुण्यं जामदग्न्याश्रमं सुभ भनेर स्कन् पुराणमा भनिएको छ।
श्यामा एलाको सङ्गममा भगवान परशुरामले एउटा ढुङ्गामा आफ्नो बन्चराले तीन हात लम्बाई, तीन हात चौडाई, तीन हात चैडाइ, तीन हातै गहिराइ रहेको कुण्डनिर्माण गरेको र सोही कुण्डमा भगवान विश्वकर्माले दश अंगुल परिमिति भएको परशुराम भगवानको प्रतिमा स्थापित गरेको पुराणमा वर्णन गरेको छ। त्यही कुण्ढड रहेको स्थान नै हालको परशुराम तिर्थ हो ।
महाकाली नदीको दक्षिणतर्फ जहाँ रंगुन नदीको संगम रहेको स्थानलार्य विष्णुमन्दीर भनिएको छ। सोही विष्णुपुर नै परशुराम क्षेत्र हो। महाकाली नदीको तटमा अलौकिक संरचना रहेको छ जुन संरचना ऋषि महर्षिहरुले यज्ञ गर्दाका बेलाका जौं, तिलको समिश्रण हो भन्ने लोक मान्यता रहेको छ । जो प्राकृतिक रुपमा चुन र ढुङ्गाको मिश्रणका रुपमा रहेको छ।
सबै किसिमका पाप नाश गर्ने चक्रतीर्थ परशुराम क्षेत्रमा रहेको छ । सोही तीर्थमा स्नान गरेर भगवान परशुरामले महावाल प्राप्त गरेको पुराणमा वर्णन गरिएको छ । चक्रतीर्थ परशुराम तीर्थ अवस्थीत रहेको पुराणमा उल्लेख गरिएको छ ।
परशुराम तीर्थमा रहेको अभूत्पूर्व चट्टानमा एउटा द्धार रहेको छ। धर्मपरायण सिद्धपुरुष सहजै द्धार प्रवेश गर्न सक्दछन् भन्ने मान्यता छ। द्धापर युगमा धर्मराज युद्धिष्ठिर, द्रोपती र चारै भाइसहित यस द्धारमा प्रवेश गरेको लोक मान्यता छ। धर्मद्धारमा प्रवेश पूर्व मनोअभिलाशा सहित बाबियोमा गाँठो पारिन्छ। मनोकामना पूर्ण भएपछि द्धार प्रवेश गरि गाँठो फुकाउने प्रचलन रहिआएको छ।
सत्य युगमा स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्माजीबाट सृष्टि गरिएका वर–पीपल यद्यपि स्थापित छन्। सत्ययूगि वर–पीपलका नामले पुजन अर्चना गरिन्छ।
महाकाली नदीको पानी भित्र छाता आकारको शिला अवस्थित छ जसलाई स्वयं भगवानले शिवजीको स्वरुप मानेर पूजा गरिन्छ।
सोह्र शिवालयका देवस्थलहरु महाकाली (सुरसागा) को किनारमा अवस्थित रहेका छन्। सोह्र सिवालय र वरदानौका वाइस देउरा ल्याउने प्रचलन रहि आएको छ। देउरा ल्याई देवसभा गरिने, स्नान गर्ने गरिन्छ।
भागेश्वर असिग्राम महादेव जगन्नाथ खिट्केश्वर बैजनाथ आदी देउरा ल्याइन्छन्। दार्चुलाको मालीकार्जुन अछामको वैद्यनाथ लगायत मानसखण्ड क्षेत्र लगायतका अन्य देवालयबाट समेत देउरा ल्याइने परम्परा रहि आएको छ।
प्रत्येक देउराहरुको छुट्टै स्नान घाट र बस्ने स्थान छन्। शवालयका देउरा स्थानमाख महालिंग स्थापित छन्। देउरामा चल मन्दीरका रुपमा गाँज, डोला तथा देवताका सामग्री सहित बाजागाजाका साथ ल्याइन्छन् ।
महाकालको जटाबाट पृथ्वी लोकमा प्रवाहीत मन्दाकिनीलार्य श्यामा, सत्यवाहिनी, सुरभागा, सरोजा, वैयासिकी, कालिन्दी, काली, महाकाली, सरयु, गंगा भनि वर्णन गरिएको छ। यसलाई स्थानीय बोलचालमा काली गंगा र केही स्थानमा शारदाका नामले पुकारिन्छ।
भगवान विष्णुले कूर्मावतार लिएको कूर्म पर्वतको आलितालबाट निस्केको नदी जो श्यामामा संगमित भएपछि लोक विख्यात नदी भएको पुराणमा उल्लेख छ। जो एला, रेणुका, रंगुन, उनरुवा आदी नामले प्रचलित पवित्र नदीका रुपमा चिनिन्छ। पुराणनमा भनिएको छ– ‘कूर्मपर्वतसम्भुता एला सा सरितां वरा।’
परशुराम तिर्थसंगै माता रेणुका नदीका रुपमा प्रवाहित भएकी छिन्। भगवान परशुरामकी माता देवीका स्वरुपमा पुजनीय रहेकी छिन्। पीता जगदग्नीको आश्रम त्यतैतिर रहेको र माता रेणुका त्यही अवस्थित रहेकाले भगवान परशुरामको जन्मस्थान पनि यहि भउको लोक विश्वास रहिआएको छ।
परशुराम तीर्थ तथा सरयू, श्यामाको महात्म्य स्कन्द पुराणको मानस खण्डमा उल्लेख गरिएको छ। महाकाली र एलाको संगममा गरिने स्नानलाई निकै ठुलो महत्वका साथमा लिइएको छ। विधिपूर्वक स्नान, तर्पण, दान गर्नाले विष्णु लोक प्राप्त हुनेमा कुनै शंका छैन भनि पुराण्ढामा उल्लेख छ। ‘परशुराम तीर्थमा नै परशुराम भगवानले तपस्या गरेर चिरञ्जिवीको वरदान पाएका थिएँ।’ पुराण्ढामा भनिएको छ।
महाकाली र रंगुनको संगममा रहेको अति नै पवित्र घाटको रुपमा बामघाट रहेको छ। बिष्णुपुरको बायाातर्फ रहेकाले बाम अपभ्रं शभएर बाङ भनिने गरिन्छ। बाङघाट स्नान , तर्पण, पितृ, कार्यको लागि निकै महत्वपूर्ण छ। एला र श्यामाको संगममा रहेको परशुराम तीर्थको मुख्य घाट भएकाले अन्त्येष्टि संस्कारका लागि पनि विशेष महत्वका साथ लिइन्छ।
विष्णुपुरको मुख्य स्थानमा मुख्य कुण्ड रहेको मान्यता छ। जहाँ पवित्र एला र श्यामाको संगम छ। त्यँही परशुराम घाट पनि रहेको छ। परशुराम घाटमा स्नान र कुण्डको पुजन, देवपुजन, केदार, वैद्यनाथ, असिग्राम, महादेव, खिट्केश्वर, जगन्नाथ आदी शिवालयहरुमा रुद्रभिशेक गर्दा परमगति प्राप्त हुन्छ भन्ने पुराणोक्ति रहेको छ।
बाङघाट, परशुराम घाटसंगै देवघाट पनि रहेको छ। सोह्र शिवालयको स्नान गर्ने देवघाटका रुपमा स्नान निकै महत्व छ। देवपूजाका लागि जलघडामा जल लैजाने सनातन परम्परा छ। महाकालीको जलबाट शिवालयहरुमा रुद्रभिषेक गरिन्छ। देवघाट संगै भागेश्वर, असिग्राम, खिट्केश्वरलगायत छुट्टछुट्टै घाटहरु पनि रहेका छन्।
परशुराम कुण्डसंगै महाकाली नदीमा अन्य धेरै कुण्डहरुको पनि महत्व छ। स्वर्गवाट आएर अप्सरा अर्थात् परीहरुले सनान गरेको परीकुण्ड, श्रीदेवले स्नान गरेको श्रीकुण्ड, सप्तऋषिहरुले स्नान गरेको सप्तहृदमा गरिने स्नानको विशेष महत्व रहेको छ।
परशुराम तीर्थसंगै एलातीर्थ पनि रहेको छ। पुनपुना र रेणुकाको संगममा अपस्थित एलातीर्थमा माघ मकर स्नानको बिशेष महत्व रहेको छ । जहाँ ऐलेश महादेवको दर्शन गर्न सकिन्छ। पुनपुना÷पुत्रदा÷पन्तुरा नदीमा स्नान गर्नाले पूत्र प्राप्त हुने मान्यता छ।
स्कनद पुराणले परशुराम तीर्थसंगै परी तिर्थको उल्लेख गरिएको छ। जहाँ स्वर्गकी अप्सराहरुल स्नान गरेका थिए। परितीर्थकै नामबाट गाउँको नाम पनि परिगाउँ रहेको मान्यता छ।
परशुराम तीर्थमा मानसखण्ड क्षेत्रका शिवालयहरुका देउराहरु ल्याइ देव सभाको स्मरण गरिन्छ।
परशुरा धाम क्षेत्रमा कुन–कुन मन्दीर छन् ?
भगवान परशुरामकी आमा रेणुकाको परशुराम तीर्थ नजिकै मन्दीर स्थापित छ। स्कन्द पुराणमा विश्वामित्रेश्वर महादेव, प्रचण्ड चण्डिका देवी र रेणुका माताको वर्णन छ। सोही रेणुका माताको मन्दीर परशुराम क्षेत्रमा रहेको छ। पुराणमा वर्णन भएअनुसार स्वर्गका अप्सराहरुले तपस्या गरि वर पाएको स्थान त्यही पर्दछ।
एलातीर्थसंगै पुनपुना नदीको किनारमा शैलेश, शिवालिका लिङ्गा अवस्थित छन्। प्राकृतिक रुपमा बनेका लिङ्गालाई शिव स्वरुप मानी पुजाअर्चना र दर्शन गरिन्छ।
परशुराम तीथीमा भगवान परशुरामको मन्दीर निर्माण प्रकृयामा रहेको छ।
मानस खण्डमा विभिन्न ऋषिहरुले तपस्या गरि सिद्धि प्राप्त गरेपश्चात् स्थापित शिव लिङ्ग सिद्धनाथका रुपमा स्थापित र पूजनीय छन्।
२०३३ सालमा लगाइएको यज्ञ पश्चात् चुनढुङ्गाको संरचना रहेको स्थानमा मन्दर निर्माण गरिएको छ। शिवमन्दीरका रुपमा दर्शनीय र पुजनीय छ।
लालपूरि महाराजद्धारा निर्मित शिव मन्दीर धर्मशाला, महर्षी विश्वकर्माको मन्दिर निर्माण भएको छ भने विभिन्न शिवालयका मन्दीर निर्माण प्रक्रियामा रहेको परशुराम क्षेत्र विकास समितिका अध्यक्ष प्रेम चन्द ठकुरीले बताए।
०४७ सालमा लगाइएको गायत्री यज्ञको यज्ञशालामा सम्बन्धित कर्तामार्फत शिलन्यास गरि धर्मशाला धुनिघर निर्माण गरिएको छ। पण्डित खगराज चटौतद्धारा निर्मीत धर्मशाला, देव यज्ञका कतर्था दामी नाथद्धारा वेद यज्ञ दामी नाथ धर्मशाला, पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माननीय नरभान कामीको निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमबाट पञ्चायन निर्माण गरिएको अध्यक्ष चन्दले बताए।
परशुराम क्षेत्रमा भगवान परशुरामको मन्दिर निर्माण प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको छ भने लुलान क्षेत्रका असिग्राम मन्दीर निर्माण भइसकेको र पञ्चायन मन्दिर र भागेश्वरको मन्दिर निर्माण प्रक्रियामा रहेको जनाइएको छ ।
परशुराम क्षेत्रको प्राकृतिक सुन्दरता, वन, वातावरण संरक्षणका लागि परशुराम धार्मीक वन २०५५ गठन भइ क्रियाशिल रहेको छ। तीन लोकमा परशुराम तीर्थ बरावरको अर्को तीर्थ छैन भनि स्कन्द पुराणको मानस खण्ड मा वर्णन भएको परशुराम क्षेत्रमा भगवान परशुराम उनका पिता जगदम्बिके तपस्या गरेको र भगवान शिवद्धारा परशुरामलाई चिरञ्जिवीको वरदान तथा तपस्यापछि फर्सा (परश) प्राप्त गरेको, भगवान परशुरामले आफ्नो फर्साले कुण्ड निर्माण गरेको अति पवित्र तीर्थ परशुराम रहेको अध्यक्ष चन्दको भनाइ छ।
फर्सा वरदान पाएको तीर्थ भएकाले यसलाई तथा फर्सा बोकेका राम भगवान भएकाले फर्सरामबाट ‘फर्सनान’ पनि भन्ने गरिन्छ। परशुराम क्षेत्रमा परशुराम भगवानबाट देवव्रत ( भिष्मपितामह), द्रोणाचार्य र कर्णलाई धनुर्विद्या प्राप्त गरेका थिए।
अति नै महत्व बोकेको परशुराम तीर्थबाट साविकको शीर्ष र जोगवुडा गाविस गाँभिएर वि.सं २०७१ सालमा परशुराम नगरपालिका निर्माण गरिएको छ। ४१४ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल ओगेटेको परशुराम नगरपालिकामा १२ वडा छन्।
माघे संक्रान्तिको अवसरमा भव्य मेला
परशुराम धाममा पुस महिनाको मसान्त तथा माघे संक्रान्तिको अवसरमा मेला लाग्ने गर्छ। परशुराम धाममा रहेका चुनढुंगा भगवान परशुरामले तपस्या गरेपश्चात होम गरेपछि बनेको भन्ने जनविश्वास रहँदै आएको छ। पुस मसान्तको साँझ यहाँ आएर रातभर आगो तापेर भक्तजनहरू जाग्राम बस्ने गर्दछन्। माघ १ गते बिहान ४ बजेदेखि महाकाली किनारमा नुहाउने भक्तजनहरूको पनि भीड लाग्छ।
माघे संक्रान्तिको दिन गंगा स्नान गरेमा सम्पूर्ण पाप कट्टी हुने तथा पुण्य कमाइने विश्वास गरिन्छ। मेला भर्न सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न जिल्ला तथा छिमेकी राष्ट्र भारतबाट समेत तीर्थालु तथा दर्शनार्थीहरू आउने गरेको परशुराम क्षेत्र विकास समितिका अध्यक्ष प्रेम चन्द ठकुरीले जानकारी दिए।
सबै तीर्थ पटक–पटक परशुराम एक पटक’ स्कन्द पुराणको मानसखण्डमा उल्लेखित उक्त वचनले नै परशुराम तीर्थको धार्मिक महत्व दर्शाउँछ। हिन्दू देवीदेवताका तेत्तिसकोटी मठ मन्दिरमध्ये परशुराम तिर्थ मात्र एउटा यस्तो पवित्र धाम हो जस्को संसारमा अन्यत्र कहीं पनि मन्दिर पाइँदैन।
स्कन्द पुराणमा उल्लेख भएअनुसार नजिकै रहेको पूर्णागिरि मन्दिरमा सतीदेवीको पूर्ण अंग पतनपछि भगवान शिवले यही धाममा लामो कालखण्ड तपस्या गरेका थिए। पछि ईश्वरीय अवतारका लागि यही भूमिमा परशुरामले तपस्या सफल पारे। परशुराम भगवान् विष्णुका दश अवतारमध्ये एक मानिन्छन्।
परशुराम धाममा ‘धार्मिक, पर्यटन महामहोत्सव’
परशुराम धाममा मा यही पुस ३० देखि माघ ८ गतेसम्म ‘परशुराम धार्मिक, पर्यटन महामहोत्सव २०७५’ आयोजना हुने भएको छ। चार धाममध्येको एक मानिने परशुराम धामलाई देश तथा विदेशमा प्रचारप्रसार गर्ने उदेश्यले महामहोत्सव गर्न लागिएको हो।
पुस ३० गते कलश यात्रासहित उद्घाटन हुने महामहोत्सवमा महास्नान, गंगा आरती, मकर महास्नान, योग विज्ञान शिविर, नित्यपूजा, संगीतमय श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञानमहायज्ञ, देउरा दर्शन, दिवा कार्यक्रम, रात्री कार्यक्रमहरु प्रस्तुत हुने आयोजनक परशुराम नगरपालिकाका नगरप्रमुख एवं परशुराम धार्मिक, पर्यटन महामहोत्सव २०७५ का संयोजक भीमबहादुर साउदले जानकारी दिए।
‘परशुराम भगवान विष्णुको छैठौं अवतारका रुपमा लिइन्छ। यो विश्वकै चार धाम मध्यको एक धाम हो। भगवान परशुरामले यही क्षेत्रमा तपस्या गरेको र यसै क्षेत्रमा उहाँहरु पनि जन्म भएको स्कन्द पुराणमा उल्लेख छ।’ नगरप्रमुख साउँदले भने, ‘यो क्षेत्र ओझेलमा परेको छ यसको महत्वलाई देश विदेशमा चिनाउन महामहोत्वसको आयोजना गर्न लागिएका हो।’
कसरी पुग्ने परशुरामधाम?
परशुराम धाम डडेल्धुराको सदरमुकामदेखि १०० किलोमिटर र कञ्चनपुरबाट ३९ किलोमिटरको दूरीमा सडक मार्गबाट पुग्न सकिन्छ। जसको पूर्वमा जोगबुडा, पश्चिममा उत्तराखण्ड भारत, उत्तरमा ऐडिवान वन तथा दक्षिणमा कुणा सिमिलखेत सडक रहेको छ। भीमदत्त सडकखण्डमा पर्ने डोटीको बुडरबाट छुट्टिने कच्ची सडकबाटो भएर ४ घण्टामा परशुरामधाम पुग्न सकिन्छ।
अपहरणपछि‍ हत्या गरेको आरोपमा एक पक्राउ